Beware! Crazy Ooredoo from Myanmar - All Things Myanmar Burmese
Previous: « Cartoon of the day about ex-president of Myanmar
Next: Paing Phyoe Thu »
Myanmar Blog » Asia Entertainment, Knowledge Base, Myanmar/Burmese » Beware! Crazy Ooredoo from Myanmar
မြန်မာ့ ရုပ်ရှင် ၌ အက်ကြောင်းထပ်နေသော် ဒိုင်ယာလော့များ
Credit to : Aung Htet Thar
Examples of soft, romantic and flawless bridal makeup for Myanmar brides.
ဲမြန်မာပြည်ကို အရေခွံဆုတ်နေတဲ့ ဘိန်းတရုတ်ခရိုနီ
မန်မာပြည်ကို အရေခွံဆုတ်နေတဲ့ ဘိန်းတရုတ်ခရိုနီ – လက်စောင်းထက် tomorrow ………………………………………………………………………….. ခရိုနီတွေအကြောင်း ပြောပြနေတဲ့ ခရိုနီလက်ဟောင်းကြီးက “တကယ်တမ်း ပြောရရင် ထိပ်သီးခရိုနီ၂၀ထဲမှာ မြန်မာတစ်ယောက်မှ
Ooredoo အသုံးပြုသူ များ သို့…..
ကျွန်တော် မိန်းမ ရဲ့ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက် က Ooredoo Sim Card နဲ့ Viber Activate လုပ်ပြီးတော့ သုံးတယ် .. ။ ဒါပေမယ့် အကြောင်း အမျိုးမျိုး ကြောင့် Viber ကို ရုံးက Desktop ပေါ်မှာပဲ ၀င်သုံးဖြစ်ခဲ့ ပြီးတော့ အဲဒီ Sim card ကို ၄ လလောက် မသုံးဖြစ်ပဲ ပိတ်ထားမိလိုက်တယ် ..။ အဲဒီ Viber နဲ့ ပဲ သူငယ်ချင်းတွေ ဆွေမျိုးတွေ နဲ့ Group Chat လုပ်ထားပြီးတော့ စကားပြောလေ့ ရှိခဲ့ တယ်. ..။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ Viber ကို လည်း သိပ်မသုံးဖြစ်ခဲ့ ဘူး .. ။ ပြသနာ က မနေ့ က မှ စပြီးတော့ သူ့ ရဲ့ Viber Account နဲ့ Group Chat မှာ တခြား တစ်ေ်ယာက်က ၀င်ပြောလာတယ် ..။ ဘယ်လောက်ထိလဲ ဆိုရင် Viber ထဲ က ဖုန်း နံပါတ်တွေ ကို Online ကနေ Chat တယ် Call တယ် ..။ မနေ့ က Viber ကနေ ကျွန်တော် မိန်းမ ကို ဖုန်းခေါ်ြ့ပီးတော့နေကောင်းလား .. ဘာလုပ်နေတာလဲ .. သူ့ ကို မမှတ်မိဘူးလား ဆိုပြီးတော့ ယောက်ျား တစ်ယောက် အသံနဲ့ ပြောပါတယ် ..။ ကျွန်တော့် မိန်းမ က ဘယ်သူလဲ လို့ မေးတော့ ဖုန်းချသွားပါတယ် ..။
အဲဒါနဲ့ ကျွန်တော့် မိန်းမ က သူ့ သူငယ်ချင်း ကို ပြောတော့သူ့ သူငယ်ချင်း က အဲဒီ ဖုန်းနံပါတ် ကို လှမ်းဆက်ပြီးတော့ စုံစမ်း တော့ကောလင်း က ဖုန်းဆိုင် တစ်ခု က ဒီ Ooredoo Sim Card ကို ၀ယ်ပြီးတော့ သုံးနေတာပါ တဲ့.။ သူမ က ဒါ ကျွန်မ ရဲ့Sim Card ပါ … ရှင် သုံးချင်ရင် လဲ ကျွန်မ သူငယ်ချင်း တွေ ကို မနှောင့်ယှက်ပါနဲ့ လို့မေတ္တာ ရပ်ခံ ခဲ့ ပါတယ် .။ ဒါပေမယ့် ကျေးဇူးရှင် က သူ က ဗိုလ်ကြိး တဲ့ … သူ လုပ်ချင်တာ လုပ်မယ် .. မကျေနပ်ရင် ကြိုက်တဲ့ သူ တိုင် လို့… သူမ ကို ပြန်ပြောပါတယ် ..။ ဒါနဲ့ ဒီနေ့ မနက် Ooredoo Operator ကို ဖုန်းဆက်ပြီးတော့ အကြောင်းစုံ ပြောပြီးတော့မိန်းကလေး တွေ ကို ဒီ နံပါတ်နဲ့ လိုက် နှောင့်ယှက်နေ လို့ဒီ ကဒ် ကို ပိတ်ပေးပါ လို့ တောင်းပန်တော့… Operator က အစ်မ က ၄ လ လောက် မသုံးပဲ ထားလို့ ကျွန်တော် တို့ က ဒီ ကဒ် ကို တခြား သူ ဆီ ကို ရောင်းလိုက်တာပါ တဲ့.။ အဲဒါနဲ့ သူမ က ဒါဆို ကျွန်မ က ဒီ ကဒ် နဲ့ တခြား Apps တွေ Personal Mail ကို Activate လုပ်ထားလို့ ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ ပိတ်ပေးပါ ပြောတော့.. အဲလို လုပ်လို့ မရဘူး တဲ့ ..။ လက်ရှိ သုံးနေတဲ့ သူ က ဦးစားပေးရမယ် တဲ့ ..။
ဒါဆို ဘယ်လို လုပ်လို့ ရမလဲ ဆိုတော့.. ရဲစခန်း ကို သွားတိုင်ပြီးတော့ရဲစခန်း က စခန်းမှူး လက်မှတ် ပါမှ လိုင်းပိတ် ပေးလို့ ရမယ် တဲ့ ..။ ဒါနဲ့ အဲလို လုပ်ဖို့ အဆင်မပြေလို့ ပါ … နောက်ပြီးတော့ ဒီ ကဒ် နဲ့ရုံးလုပ်ငန်း တွေ ကို အဓိက အသုံးပြုခဲ့ တာ ဖြစ်လို့မလိုလားအပ် တွေ ပြသနာ တွေ ဖြစ်လာမှာ စိုးးလို့ဒီ ကဒ် ကို ပိတ်ပြီးတော့ဝယ်ထားမိတဲ့ ကဒ် ပိုင်ရှင် ကို တခြား နံပါတ် နဲ့ ကဒ် တစ်ခု ပြောင်းပေးပါ ပြောတော့.. မရပါဘူး တဲ့.. ။ ဒါနဲ့ရှင်တို့ ဆီက တာဝန်ကျ မန်နေဂျာ နဲ့ စကားပြော ခွင့်ပေးပါပြောတော့.. ဖုန်း လွဲပေးမယ် ဆိုပြီးတော့၅ မိနစ် လောက် Hold ထားပါတယ် ..။ ပြီးတော့ မှ ၂၄ နာရီ အတွင်း အစ်မ ကို အကြောင်းပြန်ပေးပါမယ် ဆိုပြီးတော့ ပြောပါတယ် ..။
ညနေ ကျတော့ ဖုန်း ၀င်လာပြီးတော့ သူတို့ က လိုင်း ကို ပိတ်ပေးလို့ မရပါဘူး .. တကယ်လို့ ပိတ်စေချင်ရင် ရဲစခန်းမှာ အကျိုးကြောင်း ပြောပြပြီးတော့ စခန်းမှူးး လက်မှတ် နဲ့ ထောက်ခံစာ ယူလာခဲ့ ပါ .. ဒါမှ ပိတ် ပေးလို့ ရပါမယ် တဲ့ ..။ ဒီ Sim Card နဲ့Activate လုပ်ထား တဲ့အစ်မ ရဲ့ အရေးကြီး တဲ့Apps တွေ Personal Mail တွေ ကို တော့Deactivate လုပ်ထားလိုက်ပါ တဲ့..။ ကျွန်တော့် မိန်းမ နဲ့ သူ့ သူငယ်ချင်း က ဒီကိစ္စ တွေ ကို ပြောနေတုန်း မှာပဲ .. Viber မှုာ ကျေးဇူးရှင် က ကျွန်တော့် မိန်းမ ကို လှမ်း ဟိုင်း ပြီးတော့ အရေးမပါတာတွေ လာပြောနေလို့. ကျွန်တော် က အဲဒီ နံပါတ် ကို Block လိုက်ပါတယ် ..။
ကဲ .. မိတ်ဆွေ တို့ စဉ်းစားကြည့်ကြပါ .. ။ Sim Card ကို ၀ယ်ထားပြီးတော့မသုံးပဲ ပစ်ထားရင် လိုင်းပိတ် တယ် ဆိုတာ ကို လက်ခံ ပါတယ်..။ အခု ကျတော့ လက်ဝယ် Sim Card ရှိနေတဲ့ သူ ရဲ့ နံပါတ်ကို အခြား သူ တစ်ယောက် က ၀ယ်ယူသုံးစွဲလို့ ရတယ် ဆိုတာတော့Privacy Security မရှိဘူးလို့ ခံစားရပါတယ် ..။ နောက်တစ်ခု က Operator Company အနေ နဲ့ 
မလုပ်သင့်ဘူး လို့ မြင်ပါတယ် .။ MPT နဲ့Telenor က အသုံးမပြုတာ ကြာတဲ့Sim Card တွေ ကို လိုင်းပိတ်လိုက်တာပဲ ကြားဖူးပါတယ် .. တခြား တစ်ယောက် ကို ရောင်းစားတာတော့ မကြားဖူးပါ ..။ ပြီးတော့ကျွန်တော့် မိန်းမ သူငယ်ချင်း က ဒီ ကဒ်ကို ရုံး လုပ်ငန်းမှာ အဓိက သုံးခဲ့ တာ ဖြစ်လို့မလိုလားအပ်တဲ့ ပြသနာ တွေ ဖြစ်လာမှာ စိုး လို့ပိတ်ပေးပြီးတော့ တခြား ကဒ်ပြောင်းပေးဖို့ ပြောတာ ကို လဲ တာဝန်ယူ ခဲ့ ခြင်း မရှိပါဘူး .။ ငွေကြေး အကျိုးမြတ် တစ်ခု ကို သာ ကြည့်ပြီးတော့ User အတွက် နစ်နာ မှူ ကို တာဝန် မယူပေးနိုင် တဲ့Operator ကို ဆက်လက် သုံးစွဲဖို့ဘယ်လို ယုံကြည်ရတော့ မှာလဲ …. ။
Credit to Htoo Yang
Story of one womanizer from Nay Pyi Taw